Guddoomiyaha baarlamaanka oo kullan la yeeshay madaxda sare ee Jabuuti (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha baarlamaanka oo kullan la yeeshay madaxda sare ee Jabuuti (SAWIRO)
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Jabuuti ayaa kullan aan caadi ahayn la yeeshay madaxda ugu sareeysa dalkaasi, iyagoona ka wada hadlay xiriirka iyo xoojinta iskaashiga labada dal.
Madaxda dalka Jabuuti ee uu ugu horeeyo oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Soomaaliya uga mahad celiyay doorkii lama illaawaanka ahaa oo ay ku lahaayeen madax banaanideeda 27-kii June 1977-kii, xilligaasi oo ay Jabuuti ka xurrowday Faransiiska.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb galo munaasabadda xuska maalinta xurriyadda Jabuuti ka qaadatay Faransiiska, taas oo ku beegan maanta oo ay tahay 27-ka June.
Sidoo kale, munaasabadaasi ayaa waxaa ka qeyb gali doonno madax sare oo ka socoto dalalka deriska la ah Jabuuti iyo kuwa ay saaxiibbadda dhaw yihiin.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in musaabadda maalinta xuriyadda Jabuuti ay toos uga bilaabato caasimadda dalka Jabuuti.